आठ घण्टा भइसक्यो बहिनीको नि*धन भएको, फोन गरेर बोला`उंदा पनि मला`मी कोहि आएनन् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/आठ घण्टा भइसक्यो बहिनीको नि*धन भएको, फोन गरेर बोला`उंदा पनि मला`मी कोहि आएनन् !
आठ घण्टा भइसक्यो बहिनीको नि*धन भएको, फोन गरेर बोला`उंदा पनि मला`मी कोहि आएनन् !
काठमाडौंको एक अस्पतालमा बहिनीको नि`धन भएको जानकारी गराउँदै दाइले फेसबुकमा लेखेका छन् , ‘आफन्तहरुलाई फोनबाट पनि सम्पर्क गरे, तर आठ घण्टा भइसक्यो, मलामी जुटिरहेका छैनन् । कोरोना भाइरसका कारण बहिनीको नि`धन भएको पनि होइन, तै पनि ज्यान जाने जोखिमका अगाडि मलामी बन्न आफन्तहरु नै तयार देखिंदैनन् ।’
यस्ता मार्मिक विवरण सामाजिक सञ्जा`लमा यत्रतत्र पाइन्छन् । विश्वका म`हा`शक्ति र समृद्ध मुलुकहरु कोरोना भाइर`सका कारण पराजित हुँदैछन् । युवराजदेखि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुसमेत कोरोना भाइरसको चपेटामा परिसकेका छन् । नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकले सरकार र प्रतिप`क्ष`बीच कुनै विभाजनको भावन देखाई कोरोना भाइरसकाविरुद्ध एकता प्रदर्शन गरेका छन्, उदाहरणीय व्यवहारका लागि स्यावासी पाइरहेका छन् । तर, विश्व`का म`हाशक्ति राष्ट्रहरुबीच कोरोनाविरुद्ध एकीकृत ढंगले प्रतिरोध गर्ने तत्परता नभएका कारण दिन–रात मृत्युको संख्या बढिरहेको छ ।
कोभिड–१९ पनि भनिने यस भाइरसको संक्रमण कालको प्रारम्भमै विश्व यति धेरै अस्तव्यस्त बनेको छ, जबकि नियन्त्रणात्मक अवस्थामा केबल छिमेकी चीनमात्र देखिन्छ, महाशक्ति अमेरिका लगायत इटली, इरान, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम आदि मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस डडेलोझैं सल्किरहेको छ । निकट भविष्यमै नियन्त्रणको सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
मापसेले बेसुरमा वडा अध्यक्ष मेरो घरमा आए र सिधै शरीर माथी चढे !